MY GOOGLE MAPS - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Ọrụ Ịntanetị My Maps site na Google mepụtara na 2007 na ihe mgbaru ọsọ nke inye ndị niile nwere mmasị nwere ohere iji mepụta map nke ha na akara. Akụ a gụnyere ngwá ọrụ kachasị mkpa, ịnweta interface kachasị oke. Enwere ike site na ndabara niile ma ghara ịchọ ịkwụ ụgwọ.
Gaa na Google My Maps online ọrụ
Ọrụ a na-akpaghị aka na-emepụta akpaaka mbụ ya na map nke dị mkpa na Google Maps. N'ọdịnihu, ị nwere ike itinye ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ọkwa ọzọ, na-ekenye aha ndị pụrụ iche ma na-etinye ihe ndị dị mkpa na ha. N'ihi ịrụ ọrụ dị otú ahụ, map mbụ ahụ anọgidere na-adịgide, na-ahapụ gị ka ihichapụ ma dezie ihe ndị e kere kpamkpam n'aka.
Ngwaọrụ ndị ọrụ site na ịntanetị na-esichapụtụbeghị ya site na Google Maps na, ya mere, kwe ka ị dee akara nke mmasị, mepụta ụzọ ma ọ bụ nha anya. Enwekwara bọtịnụ nke na-emepụta akara na map, ekele nke ị nwere ike ịmepụta eserese nke enweghị ike.
N'oge e kere akara ọhụrụ, ị nwere ike itinye nkọwa ederede ebe ahụ, foto, gbanwee ọdịdị nke akara ngosi ma ọ bụ jiri isi dị ka ebe maka ụzọ.
Ihe ndị ọzọ dị mkpa bụ ọrụ dị mkpa bụ nhọrọ nke mpaghara mbụ na map. N'ihi nke a, n'oge mmeghe ya ga-agagharị na ebe kwesịrị ekwesị ma na-emegharị.
Site n'iji ọrụ Google ọ bụla, a na-arụ ọrụ a na-akpaghị aka na otu akaụntụ, na-echekwa mgbanwe niile na ọrụ dị iche na Google Drive. N'ihi mmekọrịta, ị nwekwara ike iji ọrụ ndị e mere site na ọrụ ịntanetị na ngwaọrụ mkpanaka site na ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na e nwere map eji iji My Maps na akaụntụ gị, ị nwere ike ịmekọrịta site na iji Google Maps. Nke a ga-enye gị ohere ịnyefe akara niile gaa na map Google dị ndụ.
A na-eji saịtị Google My Maps eme ihe ọ bụghị naanị na ojiji nke onye ọ bụla na-emepụta map, kamakwa mgbe ọ na-ezigara ndị ọrụ ndị ọzọ ọrụ ahụ. N'oge nchekwa, ị nwere ike ịtọ ntọala n'ozuzu, dịka aha na nkọwa, ma nye ohere site na ntinye aka. Akwadoro site na nzipu ozi, site netwọk mmekọrịta na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
N'ihi ohere nke izipu kaadị, ịnwere ike bulite ọrụ ndị ọzọ. A ga-egosiputa nke ọ bụla na teabụ pụrụ iche na ibe mbụ nke ọrụ ahụ.
Bubata na mbupu
E nwere ike ịdebe map ọ bụla, n'agbanyeghị nọmba akara, na kọmputa dị ka faịlụ na mgbatị KML ma ọ bụ KMZ. Enwere ike ile ha anya na mmemme ụfọdụ, isi nke bụ Google Earth.
Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ Google My Maps na-enye gị ohere ịbubata ọrụ site na faịlụ. Iji mee nke a, na nke ọ bụla ejiri aka kee oyi akwa nwere njikọ pụrụ iche na enyemaka dị mkpirikpi na ọrụ a.
Maka mma, saịtị ahụ na-enye ọkwa nke map ahụ, igbochi ngwaọrụ ọ bụla maka edezi. Mgbe ị na-eji njirimara a, ọrụ ahụ dị nso na Google Maps dị ka o kwere mee.
Ozugbo ihe okike zuru ezu, ị nwere ike ibipụta map ahụ site na iji ngwá ọrụ ọ bụla nke ihe nchọgharị ọ bụla na onye nbipute. Ọrụ ahụ na-enye ọrụ nzọpụta dịka ihe oyiyi ma ọ bụ faịlụ PDF dị iche iche na nhazi nke ibe.
Atụmatụ ndị dị na ya;
Nweta asụsụ Russian;
Mekọrịta na akaụntụ Google;
Enweghị mgbasa ozi;
Ịkekọrịta na Google Maps.
N'ihi nyochaa zuru ezu nke My Maps, nanị otu azụghachi pụtara ìhè, gụnyere njedebe ọrụ. Ị nwekwara ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ dị ala, ma ọ na-esiri ike ịpụta adịghị ike nke akụ.
Na mgbakwunye na ọrụ a na-ahụ maka ịntanetị, enwekwara ngwa Google nke otu aha ahụ na-enye ike yiri nke ahụ na ngwaọrụ mkpanaka Android. Ọ bụ ugbu a ka dị ala na weebụsaịtị, ma ọ ka bụ nnukwu nhọrọ ọzọ. Ị nwere ike imata ya na ibe na ụlọ ahịa Google.